အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? Tip #2 Self-criticism ထက် Self-coaching ကိုဦးဆောင်ပါ | Mycanvas
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? Tip #2 Self-criticism ထက် Self-coaching ကိုဦးဆောင်ပါ
Tip #2 Self-criticism ထက် Self-coaching ကိုဦးဆောင်ပါ
မနေ့ကပြောပြသွားတဲ့ Tip 1 ကလို ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်မှာ မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်မလဲ? ဥပမာ – ၀န်ထမ်းတစ်ဦး က မိမိအပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲ ဘာတွေကိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီး တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေဟာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကိုရှာဖွေပြီး အချက်အလက်တွေကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရန်ရည်ရွယ်တဲ့ Self-coaching ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတစ်ဖက်အနေနနဲ့ အဖွဲ့ခေါင်း‌ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ အဖွဲ့၀င်များမိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်ခြင်း (Self-criticism) မပြုရန် ဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Self-criticism ဆိုတာဟာ “ငါဟာပျင်းရိတာပဲ၊ ငါဟာရူးတာပဲ” စတဲ့ မိမိကိုယ်ကို မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့မြင်တဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွေးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး အဲ့လိုအတွေးတွေမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေမပါဝင်ပါဘူး။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုအတွက် အဖွဲ့၀င်တစ်ယောက်က ဘယ်လိုအချက်တွေတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေရန်ကူညီလိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်ဟာ မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အခြားအဖွဲ့ဝင်များနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက် မိမိကိုယ်ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက က “ကျွန်တော့်မှာဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူး” လို့ ပြောလာခဲ့ရင် ဒါဟာ သူ့ကိုယ်သူ တခြားသူများနဲ့ ယှဉ်ပြီးမြင်ကြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မှာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ သူဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပြောပြီး အားပေးနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဖွဲ့ဝင်တွေဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုကျော်ဖြတ်ဖို့ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။